Kukiiye Gaanjibiil weyn Man Cookie + Template (Qurxinta Video) - Kukiyada
Kukiiye Ginjabiil weyn
Kukiyada weyn ee ragga sinjibiilku ku jilicsan yahay ee ku jilicsan gudaha iyo waxyaabo badan oo xiiso leh oo ka baxsan
Ninkayga Dan ayaa waxyar uun la qabatimay Kukiyada sinjibiil . Runtii wax fikrad ah kama qabin ilaa maalin maalmaha ka mid ah aan aaday mid aan naftayda ka helo qaybtii ugu dambaysay iyo meeshii ay wada tageen! Khiyaanada! Wax yar ayaan kaftan ka sameynay laakiin waxay ahayd wax laga argagaxo markay arkeen inuu aad u jecel yahay iyaga! Waxba ma dareemayaan wax kafiican sida loo kariyo waxyaabo wanaagsan oo ay cunaan kuwa aad jeceshahay!
Kukii ninkan sinjibiil ku dubay ayaa fiican oo jilicsan oo dibedda ku calashanaya laakiin adag oo ku filan oo ay si fudud u qabsan karto waa qaab. Waxaan jecelahay inaan qurxiyo buskudkeyga weyn ee buskudka leh ee leh buskudka boqortooyada iyo badhamada cirridka qaarkood.
Ama waad qaadan kartaa darajo oo waxaad u adeegsan kartaa jilitaankaaga boqortooyada si aad u sameysid isugeyn qurux badan oo fool xun. Ha iska dhigin sidii adigoon rabin, waan ogahay inaad sameyso
Sida loo sameeyo buskud weyn nin sinjibiil ku jira
Si aan u sameeyo buskudka weyn ee ragga sinjibiil ah, waxaan ku bilaabayaa kooxdayda Kukiyada sinjibiil cajiinka iyo ninkeyga sanjabiilka rootiga bilaashka ah.
Isku duub cajiinkaaga qiyaastii 1 / 4-1 / 2 ″ qaro weyn una adeegso tusaalaha si aad u gooyso dhowr nin oo sinjibiil ku jira. Waxaan jecelahay inaan tan ku sameeyo dusha sare ee waraaqda si ay ugu fududaan karaan dhaqaaqo. Waxaad isticmaali kartaa haraaga haraaga ah si aad u sameyso rag badan oo sanjabiil ah hadii aad jeceshahay.
strawberries iyo macmacaan keega cuntada
Kar ninkaaga weyn ee sinjibiil ku kari ilaa 14-18 daqiiqo. Kaga sii dheeree cookies-ka adag ka dibna u daa inay si buuxda u qaboojiyaan ka hor intaadan ka saarin warqadda xoqitaanka si looga hortago wax kasta oo ku dhaca burburka buskudkaaga.
Markaad qabowdo, waad qurxin kartaa ninkaaga weyn ee sinjibiil si kastaba ha noqotee! Halkan waxaa ku yaal dhab ahaantii hab fudud oo aad ugu qurxin karto taada sida aan tayda u sameeyay.
Sidee loo qurxiyaa buskudka nin weyn oo sinjibiil ah
Marka hore waxaan khafiifiyaa qaar ubaxnimada boqortooyada ee joogtaynta oo ah muraayadaha indhaha ugu sarreeya sidaa darteed maahan inaan ku buuqo tuubooyinka iyo daadadka waxaanan ku habboonaan karaa qaybta xiisaha leh. Waxaan isticmaalaa # 2 caarada dhuumaha iyo boorso tuubo ah waxaanan ku buuxiyaa dhawr qaaddo oo ah miraha boqortooyada.
Waxaan ku bilaabayaa biibiile yar oo ku saabsan gacmaha, lugaha iyo dhexda ninka sanjabiillaha ah. Ka dib dhowr dhibco oo ku yaal bartamaha si loogu dhejiyo badhamada gumdrop .
Waxa kaliya ee haray waa in la tuuro laba indhood. Waxaan u midabeynayaa xoogaa yar oo ah miraha boqortooyada casaan iyo cagaar afka iyo ka dib sunnayaasha. Dhammaan waa la qabtay! Sow isagu sidaa uma qurux badna!
u samee dhadhanka keega sanduuqa sida keegga rootida
Kukii nin weyn oo sinjibiil ku leh funaanad fool xun
Hagaag markaa waxaan hayey tan yar oo ukun boqortooyo ah waxaanan doonayey inaan xoogaa la tartamo sidaa darteed wax yar baan waalanahay waxaanan sameeyay buskud weyn oo nin sinjibiil ku jira oo leh dhar jilicsan oo kirismaska ​​ah Aad u xiiso badan!
Waxaan ku bilaabay anigoo qaadanaya isla cufnaanta boqortooyada ee ku taal caarada # 2 oo aan sharaxay cookie oo dhan. Kadibna waxaan ku daray qoorta, xirmooyinka iyo guntin.
Waxaan tuuray qaar ka mid ah cagaarkeyga dhammaan goobihii loogu talagalay qoorta, xirmooyinka iyo guntinta. Tani dhab ahaan waa wax fudud, waxaan haystaa eber xirfado dhuumaha laakiin tani waa sida midabka tirada.
Marka xigta waxaan ka sameeyay laydi caddaan ah bartanka surwaalka oo aan ku sharaxay xariijimo casaanka boqortooyada cas iyo cagaarka boqortooyada cagaaran. Waxaan gacmaha ka buuxsamay casaanka sidoo kale. Ka dib waxaan ku tuuray xoogaa baraf baraf ah ceel-layda cad.
Sii wad xariijimaha guduudka, cagaarka iyo caddaanka kor iyo hoosta leydi-cad cad illaa inta boosku buuxsamayo. Isticmaal caday si aad ugu jiidtid xariijimaha dhexdooda si aad u abuurto muuqaal muuqaal ah (fiiri fiidiyaha). Ku dar surwaal haddii aad dareentay in ninkaaga sinjibiilku uu yara qaawan yahay (Sidii aan yeelay) oo aad wada dhammaysay!
Aniga shaqsiyan waan jeclahay dhadhanka macaan ee kudhisan boqortooyada buskudka sidaa darteed aniga ninkeyga sinjibiiska oo aad loo qurxiyay ayaa dhadhan fiican oo hubaashaana waa baashaal badan!
Ma rabtaa xiiso dheeri ah sinjibiil? Bal eeg annaga keega nin sinjibiil casharro
Cookie nin weyn oo sinjibiil ku jilicsan oo jilicsan oo dhadhan iyo dhadhan fiican leh moose, subag iyo dhir udgoon. Ku fiican inaad ku qurxiso miraha boqortooyada oo aad u keento xafladdaada fasaxa ee soo socota ama inaad hadiyado u siiso. Waqtiga Diyaarinta:10 daqiiqado Waqtiga karinta:18 daqiiqado Waqtiga nasashada:1 saac Wadarta Waqtiga:22 daqiiqado Kalori:797kcal
▢labaatan oz Burka AP
▢1 tsp budada dubista
▢laba tsp qorfe
▢1 tsp sinjibiil budo ah
▢1/2 tsp lowska
▢1/4 tsp toon ah
▢7 oz subag aan cusbo lahayn
▢5 oz sonkorta buniga ah
▢8 oz molasooyin
Kuleyli foornada ilaa 350ºF Isku kari budadaada, budada dubista iyo soodhaha. Dhinac iska dhig.
Subagga dhalaali oo ku dar aagaaga fiicni. Si hoose ku dar sonkorta buniga ah, aaladaha, cusbada, qorfe, sinjibiil, lowska iyo toon ah oo isku walaaq illaa inta la isku darayo, qabooji dhowr daqiiqo.
Weelka baaqigaaga wax ku qaso, marka isku daridu qabowdo ilaa heerkulka qolka, ku dar ukunta ugana yeer illaa inta la isku darayo.
U beddel lifaaqaaga suufka oo ku dar burka aad ku dartay. Isku qas ilaa cajiinkaagu bilaabmayo inuu sameysmo. Cajiika ayaa wali xoogaa dheg dheg dhegi doona.
U kala qaybi cajiinka kala badh, una samee qaab afar gees ah oo si adag u duub baakad balaastig ah oo dhig qaboojiyaha ugu yaraan 1 saac.
Marka cajiinka la qaboojiyo. Iskudub cajiinka ilaa thickness ”-1/2’ dhumuc dusha nadiif ah oo bur ah. Khafiifinta aad u rogto cajiinkaaga, buskudka cookies ayaa noqon doona. Haddii cajiinkaagu isku dhego, waxaad u baahan kartaa inaad dib u cajiiso cajiinkaaga (labada dhinacba) markaad socoto.
Iska yaree buskudkaaga adoo adeegsanaya qaabka weyn ee cookie-ka loo yaqaan 'cookie man man'
Waxaad ku karisaa xaashida cookie ee buskudka leh buskudka 14-18 daqiiqo ama ilaa geesaha ay inyar kafeegaan.
U daa in aad si buuxda u qaboojiso dhowr daqiiqo ka hor intaadan ka saarin xaashida cookie-ka oo aad saartid sariirta qaboojiyaha si aad si buuxda u dhigtid
Qurxiso buskudkaaga la qaboojiyey!
Sameynta buskudka ragga sinjibiilku wuxuu noqon karaa mid xiiso leh! Kaliya samee cajiinkaaga, dubo buskudkaaga ka dibna faahfaahinta dhaxan leh barafka boqortooyada ! Looma baahna xirfado tuubo gaar ah. Waxaan isticmaalay caarada dhuumaha # 2 iyo bacda dhuumaha iyo casaanka, madow iyo cagaarka midabka cuntada ee americolor.
U adeegida:1buskud|Kalori:797kcal(40%)|Kaarboohaydraytyada:125g(42%)|Protein:kow iyo tobang(22%)|Dufan:28g(43%)|Dufan Dufan:17g(85%)|Kalastarol:102mg(3. 4%)|Sodium:531mg(22%)|Kaliumperyamper:789mg(2. 3%)|Fiber:3g(12%)|Sonkor:51g(57%)|Vitamin A:870IU(17%)|Kaalshiyam:169mg(17%)|Bir:6.7mg(37%)
keegga cuntada ee malag leh miro macaan iyo karbaash qabow
sida loo sameeyo keeg vanilj ah oo laga soo bilaabo xoq
keeg strawberry cusub oo ka soo baxa xoqan